ILAM KHABARआज बढ्यो सुनको मूल्य, प्रतितोला कति? - ILAM KHABAR
आज बढ्यो सुनको मूल्य, प्रतितोला कति?
काठमाडौँ । आइतबार स्थिर रहेको सुन तथा चाँदीको मूल्य सोमबार भने बढेको छ । आइतवार ९६ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मुल्य आज ९६ हजार ९ सय तोकिएको छ । यसरी तोलामा ४ सय रुपैयाले सुनको मूल्य बढेको हो ।
तेजाबी सुन प्रतितोला ९६ हजार ४ सय रुपैयाँ तोकिएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । यसैगरी चाँदीको भाउ पनि सोमबार प्रतितोला एक हजार ३२० रुपैयाँ खरिदबिक्रीकालागि निर्धारण गरिएको छ । आइतवार चाँदीको मूल्य १३१० रुपैया प्रतितोला रहेको थियो ।